Wax Ka Ogoow Cuncunka Lugaha Iyo Waxyaabaha Sababa - Aayaha
in CAAFIMAADKA, TALOOYIN CAAFIMAAD
Lugo cuncunka waa mid kamid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee walaaca keena, waana inaadan iska indha tirin arrintaas.
Waxaa jiraan waxyaabo lala xiriiriyay xaaladdan aanan wanaagsaneyn. Halkaan ka akhriso waxyaabaha sababa lugo cuncunka sida ay xustay Jennifer Robinson, oo ah Barofeeysar ku takhasustay cudurrada faafa iyo daawada.
Dadka qaba cudurka Macaanka ama Sonkoroowga ayaa intabadan ka cawda lugo cuncunka taasoo ay sabab u tahay dhowr waxyaabood sida, cadaadiska dhiigga oo sare u kaca, wareegga dhiigga oo liita iyo dhaawac dhanka dareemaha ah.
Sare u kaca sonkorta dhiigga ee jirka ayaa lala xariiriyay jirka oo qalala iyadoo taas ay keento in intabadan ay lugahaaga raboodaan xoqis.
Waxyaabo kale oo sababi kara lugo cuncunka ayaa waxaa kamid ah wareegga dhiigga oo liita arrintaas oo intabadan ku badan dadka qaba xanuunka macaanka.
Sidoo kale waxyeello ku dhacda dareemayaasha lugaha ayaa kamid ah waxyaabaha keena lugo cuncunka.
Lugo cuncunka waxaa sababi kara Xasaasiyad jirka. Markaad xasaasiyad ka qaado waxyaabaha qaar, waxay u badantahay in lugahaaga ay ku dhacaan nabro yar yar kuwaasoo keena rabitaan ah in la xogo.
Finanka ama nabraha yar yar ee lugaha ku dhaca waa astaan muujineysa Xasaasiyadda ku dhacda maqaarka iyadoo waxyaabo badan ay keenaan Xasaasiyadda maqaarka sida, Shaambada, waxyaabaha udgoon ama carafta ah, Saabuunta iyo waxyaabo kale.
Daawooyinka qaarkood waxay la yimaadaan waxyeellooyin sida, cuncunka maqaarka. Qaar kamid ah daawooyinka sida, opioid painkillers ayaa la sheegay inay sababaan lugo cuncunka ku dhaca dadka qaar.
Daawooyinka kale ee sababa lugo cuncunka waxaa ku jiro, Sulfa drugs, chemotherapy, anticonvulsants, nonsteroidal anti-inflammatory drugs iyo kaaniiniyadda Antibiyootiga ah.
Su'aalaha Adag Ee La Weydiiyo Qofka Aad Jeceshahay Kahor Intaadan Ismehersanin